Tsika Yekambani - Shandong Nisen Trade Co., Ltd.
Kuwana "kugona kuburikidza nehunhu nekuramba uchivandudza kukosha kwezvigadzirwa & sevhisi yatinopa kune vatengi vedu & kumiririra kambani yedu zvine simba sekambani inotungamira nesangano mudanho rayo muhurongwa hwenyika itsva iyo inonzwikwa yakadzika mumakore anotevera. "
Vane hunyanzvi zvizere, vechidiki vane simba uye vakavimbika vashandi kana timu, vachishanda mushe pamwe neese maindasitiri pfungwa dze5S, KAIZEN, TPM (yakazara inobereka kuchengetedza), TQM (yakazara mhando manejimendi) kupa simba rakanaka kukambani yedu.
Tine mamiriro ehunyanzvi ayo anopararira pasi rese.
Izvi zvinotibatsira mukupa vatengi vedu akasiyana maDoors & Windows michina, inotsigirwa neepamberi yekushanda chikuva.
Yedu upvc & aruminiyamu muchina yakanyatso kuongororwa uye inochengetwa nenzira yakarongeka kuti ive nechokwadi chekugadzirwa kwekugadzira, uyezve musangano redu maitiro ekugadzira anoenderana neazvino tekinoroji tekinoroji, iyo inotibatsira kuti tiwane isina chakakwana mhando yezvigadzirwa.
Michina yega yega yatinotumira kumutengi wedu inoongororwa zvakanaka, yakarongedzwa zvakanaka uye yakakwenenzverwa kupa yakanakisa kuburitsa pasirese.
Kufungisisa chizvarwa chinotevera, tinotarisira kushanda newe.